शब्दकोश: May 2008
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, May 22, 20080: Comments
पुरस्कारले काममा उत्साह थप्छ । सन् २००७ को नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता डोरिस लेसिङ भने त्यसैका कारण आफू बर्बाद भएको ठान्छिन् ।
'पुरस्कार जित्‍नु मेरा लागि सर्वनाशको कारण बन्यो', ८८ वर्षीया बेलायती लेखिकाले बीबीसीसँग अन्तर्वार्तामा भनिन्-'मैले लेख्‍न छाडेँ । अब त एउटा उपन्यास पनि पूरा गर्न नसक्ने भएँ ।'
'पत्रकारले मलाई हैरान पारे', उनको जवाफ छ-'पुरस्कार पाएपछि मेरो दिनचर्या अन्तर्वार्ता दिनु र फोटो खिचाउनुमै बितिरहेको छ ।' उनले आफ्नो पछिल्लो कृति 'अल्फ्रेड एन्ड इमिली' अन्तिम हुने बताइन् ।
उनले बीबीसीका लागि लेख्ने गरेको नियमित स्तम्भ पनि बन्द गरेकी छन् । 'अब म केही लेख्‍नै नभ्याउने हालतमा पुगेकी छु । मसँग अब त्यसका लागि पर्याप्‍त ऊर्जा पनि छैन', डोरिसले भनिन् ।
उनले पछिल्ला पुस्तालाई उमेर छँदै चाहना पूरा गर्नेतर्फ लाग्न सल्लाह दिइन् । मान्छेको जिन्दगी धाराको टुटीबाट झरेको पानीको थोपाजस्तै भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्- 'उमेर घर्केपछिको उपलब्धि अर्थहीन हुँदो रहेछ ।'
पुरस्कार पाएको घोषणा भएको दिनदेखि सञ्चारकर्मीको झुन्डले आफूलाई घेर्दै आएको उनको दुःखेसो थियो ।
बगैँचामा फुलेका रङ्गीचङ्गी फूलसँगै
सूर्यलाई हत्केलाले छेकेजस्तै
म पनि हराउनेछु-
मौन बतासमा ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, May 20, 20080: Comments
जेठ महिनाले कहिले घाम कहिले पानी शिरमाथि बोकेर हिँड्दै छ । मनसुनले गाउँमा मकैका पात-पातमा पिपिरी बजाउन थालेको छ । छिट्टै धानको रोपाइँ पनि चल्नेछ मलाई भने असार कहिले आउला झैँ भएको छ । अर्थात् असार भेट्ने हतारले पिरोल्नुसम्म पिरोलेको छ । असार भन्नासाथै प्रत्येक श्वासप्रश्वासमा मन कस्तरी मगमगाउँछ भने, मानौँ नाकै छेउमा दायाँ-बायाँ गालाको डिलमा ढकमक्क फूल फक्रिएको होस् ।
नक्सालकै सेरोफेरोमा चक्कर मार्न एक बिहान के निस्किएको थिएँ, कसो-कसो आँखा एउटा घरको बगैँचामा गएर टाँस्सिए । बगैँचा त्यस्तो अनुपम पनि होइन, तै पनि मन एकछिनलाई त्यही माहुरी बनेर अल्झिरहृयो । साधारण फैलावटको बगैचामा आँपको एउटा बोट थियो, अहिले भर्खर चिचिला नै रहेछ दाना । र त्यसैमा झुम्मिएको मन एकाएक उदयपुरको घरतर्फ मोडिन गएको थियो । ओह्, यो आँप फल्ने मौसम ! पखेटा भएको भए झट्ट घर उडेर जाऊँ लाग्यो । सोचेँ, काठमाडौँमा बाँधिराख्‍ने त्यस्तो केही कुरा पनि छैन अहिले । साथी मुगुबाट कहिले आउने हो, पर्खिँदा-पर्खिँदा अब पर्खिनु नै जिन्दगी जस्तो लागिसक्यो । घर किन नजाऊँ म भनेर आफैँ सँग अन्तर्वार्ता गरिरहेँ र ट्वाक्कै टुङ्गो जवाफ नपाएर अलमलिरहेँ ।
घर पुगेपछि २०/२५ दिनको बसाइमा पहेंलपुर आँपसँग मितेरी गाँसेको कल्पनाले एकछिन गुलियो चाखेँ । स्मृतिका पुराना फाइल तख्ताबाट झिक्न थालेँ- बालापनमा काँचै आँप खाएर मासी पर्दा बिसन्चोले गलाएको, आँपको चोपले मुखवरिपरि घाउ भएर पोलेको, बोटमा बाँदरजस्तै झुन्डिएर पाकेको आँप तमाम पारेको, चढ्न गाह्रो हुने बोटका राताम्मे आँपको झुन्डलाई ताकेर झट्टी हानेको अनि आँपैआँपको कोसेलीपोको बोकेर नजिकका फुपूदिदीहरूका घर पुगेको । अब त ती दिन कहाँ । बोटैमा पाकेको आँप खानु त सपनामा मात्र हो जस्तो लाग्छ । उता गाउँमा घरपछाडि आँपको बोटैबोटले बगैँचा भरिभराउ छ र हामी काठमाडौँको साँगुरो घरपरिसरमा फलेको एक बोट आँप देखेर फुरुङ्ग पर्छौँ ।
राजधानीका बजारमा पहेंलै भएका आँप बेच्न राखिएको धेरै भइसक्यो । आँप पाक्न कम्तीमा पनि असार वा मध्य जेठ त हुनैपर्छ । बजारमा अहिले देखिने औषधि हालेर पकाइएका आँप नाकैनेर ठोक्काउँदा पनि सुगन्ध पाउन मुश्किलै हुन्छ । तर गाउँघरतिर आफैँ पाकेको आँप सुँघ्नु त के, तपाईँ बगैँचानेर पुग्नुभयो भने मात्र पनि भरपूर तृप्ति मिल्छ । फलको राजा हो आँप । काँचोमा अचार खान चुटुक्क अमिलो, पाक्दा गुलियो स्वादिलो ।
गएको एउटा शनिबार घरबाट ममीको फोनले पनि घर जानलाई मन चुलबुलियो । 'कहिले आउँछस् त काले ?', ममीको माया घुलेको सवाल । 'खोइऽऽ हेरुँ ...', मेरो अनिश्चयको तर अपेक्षा जगाउने बोली । हेरुँ, जान पनि सक्छु । अबका केही दिन ब्लग अपडेटमा ढिलाइ भयो वा शून्यता देखियो भने सम्झिनुहोला, म घर पुगिसकेको हुनेछु । कारण, ब्लग लेख्‍नका लागि घरमा युनिकोडसहितको कम्प्युटर छैन । त्यहाँ युनिकोड छैन त के भयो ? छ त टन्नै आँप । तपाईँलाई पनि आँप सेयर गरुँ ? धन्दा नमान्नुस्, आँप ल्याउन नसके पनि केही त पक्कै ल्याउनेछु तपाईँको लागि ।
फर्किएर लेखूँला है 'आँप-संस्मरण' !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, May 18, 20080: Comments
मे १६ को एउटा शुक्रबार फेरि हाम्रो माझमा छरिएको थियो । हामी थियौँ मन्द मुस्कानको अभिवादनमा रमाइरहेका । हामी अर्थात् गनी अन्सारी र म जीवन कार्की । गनी र जीवनको यस्तो जोडी पनि लेखिएको रहेछ । अघिल्लो शुक्रबार गयल हुन गएको हाम्रो भेटको शून्यतालाई यसपाली बढ्तै भोग गरेर बिर्सनु थियो ।
सदाझैँ हामी भेटियौँ घन्टाघरछेउको जामे मस्जिदनेरको आँगनीमा । गनीको ओठमा के थियो भनिरहनु नपर्ला, हाँसोका सहज रेखाहरूले ओठका गोलाइभरि सुरेली खेलिरहेका थिए । कान्तिपुर एफएमको न्यूजरुममा एक साता बाँधिनुपर्दाको थकान त्यहाँ शेष थिएन । हेरेर उसलाई, मैले पनि बिझाएको काठमाडौँको आफ्नो भावदशालाई सट्याकसुटुक नजिकैको भीडभाडमय जेब्राक्रसिङमा मानिसहरूको पैँतालामुनि सेलाइदिएँ । अब बल्ल मिल्यो- दुइटा फूल देउरालीमा....।
आरोहण गुरुकुलमा नाटक हेर्न जाने सोच हाम्रो धेरै हप्ताअघिदेखिको छँदै थियो । अस्ति नै को एउटा शुक्रबार गुरुकुलको दैलोमै पुगेर निराश भएर फर्किनुपरेको टर्रो सम्झना आलै थियो । त्यसबेला सञ्जीव उप्रेतीकृत उपन्यासकृतिको नाट्यरुप 'घनचक्कर' हेर्न पुगेका हामी प्रदर्शन बन्द भइसकेकाले आफैँ घनचक्करमा परेका थियौँ । अतः सचेत हुँदै फोन गर्‍यौँ गुरुकुल थुम्कोमा । धेरै समयको प्रयासपछि बल्ल फोन सम्पर्क जोडिए पनि उताबाट हामी दुईको आकांक्षालाई भने थलै पार्ने गरी आवाज सुनियो- 'आज त प्याक भइसक्यो, भोलि आउनुस् न !' भोलि.... अनि सायद हामी दुवै आदिकवि जिजुबाजे भानुभक्तलाई स्मरण गर्‍यौँ । 'ताराबाजी लै लै' मञ्चन हुँदै रहेछ तर शुक्रबार र शनिबार मात्रै देखाइने भएकाले दर्शकहरू अग्रीम बुकिङसहित नाटकमा ओइरिएछन् । जे होस्, नेपालमा रङ्गमञ्चको रङ गाढा हुँदै गइरहेको छ, सन्तोष लाग्यो । यसमा गुरुकुलको गुरु अभिभारालाई पनि मान्नुपर्छ ।
नाटक हेर्न जान नपाउँदाको ज्वरो शान्त पार्न हामी यत्तिकै गफिने भयौँ । नत्र कुन पार्टीको निर्लज्जताको समर्थनमा जुलुश लगाउन जानु थियो र ? घुम्दै जाँदा मित्रद्वय अर्जुन र प्रभात भेटिन्छन् कि भनी नयाँ पत्रिका दैनिकको कमलपोखरी अड्डामा हाजिर भयौँ । तर दुवैजना रिपोर्टिङको रौनकतिर गायब ! अनि नक्सालको मेरो अस्थायी अड्डा नै उपयुक्त सुझ्यो । कुरैकुरामा कलेज जीवनको कुरो निस्कियो । कक्षाको एसाइनमेन्टको तातो-पिरो सास्तीको प्रसङ्ग उप्कियो । कलेजका गुरुहरूको प्रकृति चिरफार भयो । अनि यस्तैमा नेपाल मानविकी (रत्नराज्य) क्याम्पसमा डिग्रीको पत्रकारिता कक्षा लिने टङ्क उप्रेतीले हाम्रो केही समय लिए ।
कति भद्र टङ्क सर,
कति नम्र टङ्क सर,
कति मिलनसार टङ्क सर,
कति सीधासादा टङ्क सर,
कति खुला दिलको टङ्क सर,
गनीले गुरुबारे सानोतिनो प्रवचन दियो । र, त्यो आत्माबाटै हृवारहृवारी निस्किएको थियो । हामी दुईको टेबल गफमा टङ्क सर 'ज्वाइन' पनि हुनुहुन्थेन त्यहाँ, जसले गर्दा सरलाई फुर्क्याउनु परोस् । गनीको गुरुसँग म पनि चिनाजानामा छु, गुरुका रुपमा नभए पनि एक कविका रुपमा । एकाध भेटको सुयोग पनि जुरेको छ । उहाँको 'मानिसपन'बाट जो कोही प्रभावित हुन्छ । डिग्रीको कक्षामा गनी, सारा अनि अमृतहरू टङ्क गुरुलाई कति चाख दिएर सुन्छन्, कति इज्जत गर्छन् अनि कक्षा सकिएपछि पनि कति सम्झिराख्छन् । साँच्चैको गुरु हुन के हुनुपर्छ, गनीहरूको अपेक्षा र तृप्त मन पढ्दा थाहा हुन्छ । गुरु हुन चर्को छ चर्को । गनीहरूका टङ्क गुरु पढाउनुहुन्छ । टेलिभिजनमा कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ । सडकमा मान्छेहरूको लस्कर हेरेर टुक्राटुक्रा भावना बटुल्नुहुन्छ । कविता लेख्नुहुन्छ । गनीका यिनै गुरु टङ्क उप्रेतीको कविता पढ्ने हो ? ल है त:
रुमालबाट खन्याइदिन्छु ताराहरू
तिमी के गछ्‌र्यौ ?
' म टाँसिदिन्छु मुक्तियोद्धाको छातीमा ।'
राखिदिन्छु तिम्रो हातमा
'यसलाई उद्‌याउँछु र काट्छु
धर्तीका सारा दुःखहरू'
'अनि फिर्ता गर्छु तिमीलाई नै सुरक्षित ।'
- (शब्दहरूको नेपथ्य, २०५६ बाट)
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, May 18, 2008 1 : Comments
- सुरेश सुवेदी
सगरमाथाहरू उभिन सक्छन्
दुःखका असिनाहरू बर्सन सक्छन्
चट्याङहरू खस्न सक्छन्
कलेजो छिया-छिया हुनेगरी
सुस्ताहरू छटपटाउन सक्छन्
कतै एकताको जग हल्लनेगरी
राष्ट्रघातीहरू सलबलाउन सक्छन्
खोलेर चेतनाको भोटेताल्चा
विवेक र विचारको साँचोले
शान्तिको दुबो उमारेर
अक्षरको रमाइलो पिङमा
बयली खेल्दै म
लाली गुराँस फुलेको
रातो कविता लेख्‍न चाहन्छु
बगरका ढुङ्गामा लतपतिएका
रगतका सिर्का पखाल्दै
फूलको बास्नामा मिसिएर
कहालीलाग्दो तस्विर मेटेर
नयाँ तस्वीर उतार्न चाहन्छु
परिवर्तनको नयाँ मोडमा
सुन्दरी युवतीको स्नेहले
लोलाएका नयाँ आँखा होइन,
छाती फुकाएर हाँसिरहेको
मेरो देशको ऐनामा
मेरो नयाँ अनुहारले
हेर्न चाहन्छु ।
भोजपुर, हाल: काठमाडौँ ।
- रुपक बनबासी
प्रारब्धमा मान्छे कति विवश हेर्नुस्
बार-बार विफल भयो सिसिफस हेर्नुस् ।
स्याहार्दा-स्याहार्दै मर्‍यो गुलाफको बोट,
कसरी फस्टाएछ यो क्याक्टस हेर्नुस् ।
विश्वास नराखूँ प्रत्यक्ष आँखाले भोगेको छ,
यथार्थभन्दा कति टाढा यो सर्कस हेर्नुस् ।
पाइएन प्रशंसाको आनन्दीमा रमाउन,
अभागीको पोल्टोमा सधैँ अपजस हेर्नुस् ।
दिक्दार हुँदा आत्महत्याको सोचाइ उर्ले पनि,
जीवनप्रति हुँदो रै'छ मोह र लालस हेर्नुस् ।
दुवै हाजिर भयौँ दिलको दूरी बोकेर
म आफ्नो कलेजो बोकेर ऊ छुरी बोकेर ।
निर्माण हुने क्रममा थियो घर पिरतीको,
तिमी आइपुग्यौ अकस्मात हुरी बोकेर ।
बिना सहयात्री जिन्दगीको उकालोमा,
बाध्य भएँ म हिँड्न दुःख नौमुरी बोकेर ।
बस्न बरु वेश होला रोई एकान्तमा,
कहाँ जाऊँ अब म यो मजबुरी बोकेर ।
सुनाउन गाउँभरि उड्दै जाऊ ए चरी,
म मरेको हालखबर जरुरी बोकेर ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, May 12, 20080: Comments
आधा रङ्ग गए पनि जवानीको फूल उस्तै
तैपनि छ जिन्दगीमा आँसुको यो मूल उस्तै ।
तिमी मात्र मेरा प्यारा भन्ने सीमा तोक्नु किन,
धेरैलाई प्यारा भन्ने गर्‍यौ होला भूल उस्तै ।
मेला अनि हाटतिरै सिक्लान् बरु केटाकेटी,
कठै यहाँ तर्साउने बन्दीझैँ यो स्कुल उस्तै ।
मुहारको गुलाफले गाढा रस फिँजाउँछ,
हेपिएछ रुपैबिना चेतनाको तरुल उस्तै ।
निम्तो लेख्‍ने समयमा आफैँ पारि पुगिन्थ्यो कि,
पारिबाट ऊ नै आओस् भन्छ तर पुल उस्तै ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, May 08, 20080: Comments
मैले तिमीलाई नै भोट दिएँ
तिमीलाई खुवाउँदा खुवाउँदै
घरमा अन्नको गेडो बाँकी थिएन
ऋण नतिरे साहुले घर छोड्न भन्यो,
छोराले पठाएको पैसा नदिए
तिमीले घर छोड्न भन्यौ,
मर्न काल आएन
जन्मेको माटो छोड्न सकिनँ
यसपल्ट मेरो अहोभाग्य
अब कहिल्यै केही नमाग्ने सर्तमा
तिमीले जाबो एउटा भोट माग्यौ
मेरो बास जोगाउनका लागि
मसँग तिमीलाई दिन बाँकी
अरु केही थिएन ।
मेरो लुरेका बाबुलाई तिमीले लगेका हौ
मैले मेरा खसमको हाल खबर मागिनँ
मैले मेरा देवताको लाश वा श्वास मागिनँ
तिमीले बैँकबाटै लुटेको
मेरो मङ्गलसूत्र सम्म पनि मागिनँ
मैले सशूल्क कार्यकर्ताले जस्तो
तिमीसँग भत्ता मागिनँ, सत्ता मागिनँ
तिमीले टाट्नाको खसी माग्यौ
तिमीले कुखुराको भाले माग्यौ
मेरो बस्ने झुप्रो पनि माग्यौ
मसँग भएका यावत् चीज माग्यौ
हामीले नाईनास्ती गर्न कहिले पो पायौँ र
भए पनि नभए पनि टक्र्यायौँ
अब कहिलै केही नमाग्ने सर्तमा
तिमीले जाबो एउटा पैसै नपर्ने भोट माग्यौ
मसँग तिमीलाई दिन
अरु केही बाँकी थिएन ।
डाँडाघरेको पनि कसले खुट्टा भाँचिदियो रे
भोट माग्न यसपल्ट कोही गाउँ छिरेन
यो चैतेदसैँको अक्षताका लागि
चामल पनि थिएन
धन्य टीका थापिमाग्न आएनछौ
मलाई आशीर्वाद र श्रापमा भेद थिएन
अब कहिलै केही मागेर नपिरोल्ने सर्तमा
अन्तिममा ज्यान जोगाउनका लागि
- गुल्मी ।
- आकांक्षा कार्की
चार कक्षामा पढ्दा, नेपाली कक्षामा 'गुरुमाप्पा' नेवारी नाटक मिसले सबैलाई पढ्न लगाउनुभएको थियो । तर कसैले पनि शुद्धसँग नेवारीमा लेखिएका कुरा पढ्न नसकेपछि बाहिर चाहिँ मन नलागीनलागी पढेको झैँ गरी देखाउँदै, भित्रभित्र दङ्ग पर्दै, मैले पढेकी थिएँ । अनि स्कूलमा अभिभावकहरूलाई देखाइने 'गुरुमाप्पा' नाटकमा रहेको 'कृष्णचन्द' केटाको भूमिका पनि मैले नै अभिनय गरेकी थिएँ । मेरो केटाकेटी दिमागमा नेपाली भाषाप्रतिको मोह त्यही बेलादेखि नै बीजारोपण भएको थियो । म अहिले पनि नेपाली भाषाको कुरा गर्नेबित्तिकै त्यही क्षण झल्झल्ती सम्झिन्छु । मैले अभिनय गरेको त्यो, 'कृष्णचन्द' को भूमिका मलाई अहिले पनि निक्कै मन पर्छ ।
'सर्कल' मा Dawa को चिठी पढेँ । चिठी साह्रै मन पर्‍यो । तर नेपाली फन्ट नभएकाले होला रोमनमा लेखिएको रहेछ । नेपाली भाषालाई रोमनमा पढ्न पाउँदा पनि निक्कै आनन्द आउँदो रहेछ । स्वरुप जुन भए पनि गुदी नेपाली भएकाले होला । Dawa को रोमनमा लेखिएको चिठी पढ्दा कतै नेपाली भाषा भोलि रोमनमा परिणत त हुने होइन भनी शंका पनि लाग्यो । अनि मेरो बाल मस्तिष्कमा रोपिएको नेपाली भाषाप्रतिको मोह फेरि जागृत भयो । मलाई केही लेख्नकालागि घचघच्यायो । र 'सर्कल' को बैठकमा नेपाली भाषामा केही लेख्छु भने । मेरो कुरा सुनेर सबैमा मुख खुल्लै रहे, आँखाका साइज एक्कासि ठूला भए । मानौँ उनीहरूको सामु अजङ्गको जनावर उभिएको छ । मन दुख्यो । अनि नेपाली भाषाको झन् माया लाग्यो ।
एसएलसीपछि हामी सयमध्ये चार-पाँच प्रतिशत मात्रैले नेपाली पढेका वा लेखेका हुनुपर्छ । कस्तो सरमलाग्दो कुरा.... कक्षा ९, १० मा पढ्दा कहिलेकाहीँ नेपालीमा लामा-लामा पट्यारलाग्दो, अल्छीलाग्दो विवेचनात्मक उत्तर दिनुपर्दा, 'नेपाली' जिन्दगी कहिले नपढ्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले मनोविज्ञान र गणितको सागरभन्दा पनि ठूला Syllabus देख्दा A Level मा पनि त्यही नेपाली पढ्न पाए कस्तो आनन्द हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अस्ति एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा, एउटी युवतीले मेरो सामु आएर भनिन्- 'You are from Rato Bangala! That’s why your English is so good!' मैले नभा'को बत्तीस दन्त देखाएर 'Thank you' फर्काएँ ।
समय कसरी परिर्वतन हुँदो रहेछ, सम्झिँदा पनि अनौठो लाग्छ, कक्षा चारमा रातो बंगलामा भर्ना हुनकालागि परीक्षा दिन लाग्दा मेरो सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै नेपाली विषय थियो । नेपाली खर्रर पढेर वन्दना मिसलाई मख्ख पारेको र अंग्रेजीमा Teddy Bear किताबको दुई पाना हक्लिँदै पढेको म कहिल्यै पनि बिर्सन्नँ । नेपाली पढ्न पाउँदा स्वर्गीय आनन्द आउँथ्यो । अनि अंग्रेजीका ठेली देख्दा मेरा टाउको दुख्थ्यो । एकताका 'Two' लाई 'Tow' Spell गरेकोले साथीहरू अहिलेसम्म पनि गिज्याउँछन् । अरुले अंग्रेजी र म्याथको माला जप्दा म चाहिँ My favourite subject is Nepali and my favorite teacher is Bandana Miss भन्थे And today, I was being congratulated for speaking good English. Funny! However, it took meawhile to achieve this 'prestigious' English speaker title. अंग्रेजी किताब मेरा दुश्मन थिए । शब्दहरू केही नबुझ्ने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण Comprehend गर्न नआउने । अब परेन आपत् ...! Box Car Children भन्ने किताब पढ्नु पर्थ्यो, पाँच पाना पढेपछि के हो के हो - दिक्कै लाग्दो ! छ-सात कक्षामा पुगेपछि बल्ल बुझ्न अलि सजिलो हुन थालियो अनि त बल्ल RACE सुरु भयो । धमाधम I started reading everything I could get my hands on ( and NO ! that doesn't include Harry potter ) अहिले पनि शब्दभण्डार ( Vocabulary ) Miss Perry को standard जति तगडा भएको छैन । कहिलेकाहीँ लगातार B3 पाउँदा त साह्रै पछुतो लाग्छ । सानैदेखि किताब पढ्याभए - .......तर अपसोच !
अँ, सानो बेलाको कुरा गर्दा मेरो ९ वर्षको भाइ नेपालीमा जिरो छ । अंग्रेजी चाहिँ शुद्ध, Tape recorder जस्तो खररर्र बोल्छ । अब उसको यो Bringing up मा कसको दोष, ( वा निर्दोष ) त ? नेपाली आउँदैन भनेर हपार्ने कि ?, अंग्रेजी आउँछ भनेर स्याबासी दिने ? नेपाली भएकाले उसलाई शुद्ध नेपाली बोल्न आउनुपर्ने हो तर पनि किन यत्रो ओझेलमा नेपाली ? समाजशास्त्रको सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ । सहरमा बसेर अंग्रेजी बोल्नु हामीलाई हाम्रो कर्त्तव्यझैँ लाग्न थालेको छ । समाजको संरचना नै यस्तै भएपछि हामी पनि यही समजमा बसेर अरु भन्दा अलग हुन सक्दैनौँ । हाम्रा अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीले अंग्रेजी बोलेको सुनेर मख्ख पर्ने हो भने भोलि नेपालमा नै नेपाली बोल्ने मानिसलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । अनि नेपाली भाषाको जगेर्ना गर्न विदेशीको टोली नेपालमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला के होला हामी नेपालीको अस्तित्व ? Manesh Sir ले कक्षा कोठामा बारम्बार भनिरहने कुरा याद आयो- 'You are here because you want to go to America.' Maybe its not the statue of liberty efÚ sf] America for everyone, but going to Australia, Uk, Newzealand and even India for that matter, doesn't makeadifference to the whole idea. So people, stop rationalizing!
Lastly, for people who thought that the English version of 'Palpasa Cafe' was one of the best novels you've read in your lives. तर पल्पसा क्याफे नेपालीमा लेखिएको उपन्यास हो । र धेरै चर्चामा आएपछि मात्र यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको हो । त्यसैले पल्पसाको सही मज्जा नेपाली पल्पसा क्याफेमा नै छ । ( नेपाली पढ्नकालागि एसएलसीमा ६० प्लस आएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । )
- रातो बङ्‌गला स्कुल, पाटनढोका ।
र धुरुधुरु रुवाउँछ
कर्कटपातामा रमाएको ढोलके वर्षासँगै
दुःख आफ्नै भाषणमा
आफैँले थपडी बजाउँछ
ऋषिको श्रापजस्तै चल्छ एकसाथ
कत्ला जमेको हत्केला
र मनको खियादार मदानी
तब तातो दिनमा
बैँसालु पर्वतको आङभरि ताजा पसिनाजस्तै
गहको कापभरि बादल पोखिन्छ
तारले टनटनी पाता कसिएका ल्याम्पपोस्टहरू
घाटेहरूले लाश कुरेजस्तै
त्यसैमा पोको परेको भाग्य
फ्युज गएर पनि झुन्डिरहन्छ
अँध्यारो सडकदेखि हाँकिएको
हल्लिँदै कुमारी घरमा सिंहासन जमाउँछ
बस्छ भेट्नो चुँडिएको अनुहार-अनुहारमा
र ताछ्‌दै झार्छ रातो माटोमा सारा लालीगुराँस
दुःखबाहेक केही गर्दैन
खसम र आफ्नो लाश जलाउन
वंश रोप्ने सौतालाई
सहर्ष स्वागत गर्छ ।
॥ अनिता शिवाकोटी ॥
मकाएर भत्किन लागेको घर, भित्तामा पोतिएको रङ उडेर टाटेपाटे बनेको छ । भित्तामा टाँसिएको माटो उप्किएर भुइँभरि छरिएको छ । घरवरिपरि फोहोरै फोहोर छ । घरको छिँडीको एउटा कोठामा मधुरो बत्ती बलिरहेको छ । घर मुख्य सडकखण्डको छेउमै छ । तर पनि काम परेर गएकाहरूको बाहेक बाटो हिँड्ने कसैको ध्यान यो घरले तान्दैन । ढप्काइराखेको ढोका उघार्दै हामी दुईजना भित्र पस्यौँ । भित्र पस्न नपाउँदै कोठामा गुम्सिएको ढुसी हामीलाई स्वागत गर्न आइपुग्यो, सासै रोकिएलाजस्तो गरी । राजधानीभित्र पनि यस्तो घर ? पहिलोपटक म यस्तोघरमा छिर्दै थिएँ ।
एउटा बालक, अन्दाजी १३ वर्षो, किताबको बीचमा आफूलाई हराइरहेको छ । निकै लगनसाथ पढिरहेको देखिन्छ । हामी उसको कोठामा छिरेको उसले पत्तै पाउँदैन । मसँगै गएकी साथीले उसलाई बोलाई- 'विकास, कत्ति पढ्छौ हो ?' उसले हामीतिर हेर्‍यो अनि आङ तान्दै, प्रतिउत्तरमा मात्र मुसुक्क मुस्कुरायो । विकासको र मेरो पहिलो पटक भेट भएकाले मैले आफ्नो परिचय दिएँ । उसले पनि परिचय दियो- 'म विकास' । उसले आफूनजिकै रहेको स-साना दुईटा टुलतिर देखाउँदै भन्यो- 'बस्नुस् न !' उसले देखाएको टुलतिर बस्दाबस्दै मैले कोठाको चारैतिर नियालेँ । निकै मिहिनेत गरेर सजाइएको छ कोठा । कोठामा सामान निकै थोरै छन् र महँगा पनि होइनन् तर पनि निकै राम्रो र व्यवस्थित कोठा । त्यस्तो थोत्रो घरभित्र पनि यति राम्रो कोठा हुन सक्छ, कसले सोचेको होला ?
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, May 04, 20080: Comments
धेरै दिनदेखि एकतमास भइरहेको मनले साथीको गुनगुन खोजिरहेको रहेछ । जब साथीको सङ्गतिमा झ्याम्मिएँ, औषधिको काम गरिहाल्यो । मन कति बोझिलो र दिमाग कति जेलिएको रहेछ भने, बितेका उल्लेखनीय दिन सँगालेर शब्दहरूसँगै ब्लगको आँगनीमा नाच्न नपाउँदा ममा गाँठिएर बसेको उखरमाउलो सकसक साथीसामु सरक्क फुकिहाल्यो । कम्प्युटरमा युनिकोड सेटिङमा खराबी देखिएकाले केही समययता लेख्न नपाएर आफ्नो संसार आफूमै सीमित राख्नुपरेको थियो ।
अब कुरो शुक्रबारे साथीको । साथी ऊ गनी अन्सारी । कान्तिपुर एफएमको न्यूजरुमबाट सातामा बल्ल एकदिन मिल्ने फुर्सद उसलाई कत्तिको बिझाउँदो हो ? बिझाउनु कहाँ, बरु सायद फारो गरीगरी पलहरू चाख्न पनि नपुग्दो हो । यसैले ऊसँगको शुक्रबारे साथ आक्कलझुक्कल जुर्छ । जुरेपछिको शुभ लग्न - ऊ बराबर म मक्ख र भरिपूर्ण ! मानौँ तब हामी नयाँ ग्रहको खोजी र प्राप्तिसँगै जिन्दगीको असली मोक्ष भोगिरहेका हुन्छौँ ।
गनीसँग स्नातकसम्मको मेरो कलेज-यात्रा मध्यम लयमा कुदेको थियो । अर्थात् बरोबर आत्मीय भेट भइरहे पनि चुम्बकसरि एकै ढिक्का बन्ने घुलमिलमा हाम्रो सम्बन्धले उस्तो शक्ति देखाएन । र पनि बरोबरको आत्मीय भेटमा हामीले आ-आफ्ना खुजुरा पलहरू आपसमा विनिमय गर्दै आयौँ, तृप्तिको हद यो के कम थियो र ! अनि यो पनि, अहिले साताको बल्ल एकचोटि त्यो पनि चिठ्ठाजस्तै मिल्ने भेटघाटमा हामी दुई कति निकटतासाथ पेश हुन्छौँ भने मानौँ अफ्रिकाको भोकमरीग्रस्त इलाकामा एउटा बालकको पेट र ढाड एउटै भएझैँ हाम्रो प्रियता छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सहरका भित्ताभरि टाँसिएका पोस्टरहरू झिलझिलाकार रहँदै मे २ शुक्रबार अनेक धपेडीबाट उम्किएर हामी फेरि जमघटमा आमनेसामने मिसिएका थियौँ । यो पनि एउटा दिन थियो सायद, चिठ्ठै परेर आएको । पुतलीसडकछेउको भीडभाडमय साइबर क्याफेको स्टेशनमा नियोजित रुपमै हामी भेटियौँ । क्याफेमा केहीबेर ऊ अन्तर्राष्ट्रिय वेबसञ्जाल 'हाइ फाइभ' को फेभरमा डिग्री नाप्ने धुनमा देखियो । दिल र दिमागको थर्मोमिटरमा पारो कति उक्लियो हँ ?
यताउता नापजाँच गरेपछि आयो निष्कर्षः +२ को परीक्षाको तयारी गर्दै गरेकी मोरिससकी साथी मिजाहले खूब मन दुखाइछ । साथीले मन कुँढिनेगरी लेखेको मेसेजले गनी त्यो मेसेजभन्दा मूड अफमा देखियो । साथीबीच निकटता बढ्दै गएपछि अपेक्षा बढ्दै जान्छ तर परिस्थिति सहज नहुँदा चित्त कतिबेला कति टुक्रा आलुमा परिणत भएर फ्रेन्च फ्राइ बन्छ, भन्न सकिन्न । अनि त चोखो मित्रतामा पनि मुटावले डेरा बनाइहाल्छ । गनी र मिजाह त्यस्तै कष्टकर अवस्थाको नमूना बन्दै थिए । अनि बतासियौँ हामी बागबजारको एक चिया कुनोमा ।
भए कुरा सम्बन्धका...
भए कुरा साथी र असमझदारीका...
भए यान्त्रिक नाटकीय संसारका...
भए घरपरिवारको ममताका...
भए अनपेक्षित बढ्ने दूरीका...
भए अनि यस्तै विविध आँसुजस्तै नरम वेदनाका कुरा ।
बोल्यो अगाडि ऊ- 'एउटा दाइले सोध्नुभयो, भाइ तिम्रो ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दा माग्नचाहिँ के माग्छौ ? जवाफ मुखैमा थियो - 'दाइ, म कोही केटीसँग मेरो प्रेम नभइदेओस् भनेर पुकारिरहेको हुन्छु ।' गनीलाई थाहा छ सम्बन्ध मीठो हुन्छ, तर एकजनासँग बढेको निकटताले छँदाखाँदाको सारा दुनियाँसँग टाढिनुपर्ला भनेर ऊ प्रेम नपार है हे ईश्वर भनेर प्रार्थना फुसफुसाउँछ, कति अनौठो ! र, उसलाई त्यो एकजनासँग बढ्ने प्रेममा भर पनि छैन, सँगै हिँड्दाहिँड्दै कुन विन्दुमा आफ्नो मन कहालीमा डुब्ला र दुख्नुपर्ला भनेर उसलाई अत्यास लाग्छ । यसैले गनी सीमाबन्द छ सायद नारी संसारदेखि । उसको कुरा धेरै हदसम्म साँचो होइन र ?
पर्साको घर र छिमेकमा उसले प्रशस्त माया पाएको छ । पढाइ र अनुशासनमा ठीकठाक । एक जमानामा साथीहरू उसैको चिठी पढ्नलाई व्याकुल बन्थे । यसैले राजधानीबाट घर गएर फेरि फर्किने बेलामा उसका साथीहरू पिरोलिन थाल्छन् । बिदावारी भएर हिँड्दाहिँड्दै सडकछेउ लामबद्ध साथीभाइ भक्कानिएर बोल्छन् - 'हेर् गनी, पछाडि फर्किएर नहेर् है, हामी खप्न सक्दैनौँ जाने बेलाको तेरो निन्याउरो मुहार हेरेर, जा सरासर है नत्र रोइदिन्छौँ ।'
'यार, गाउँ रुवाई म आएँ', सडकमा उभिएकोउभियै गनीले शुक्रबारको छुट्न साँझमा मलाई सुनायो । तर यो सडक पर्साको थिएन, काठमाडौँको दरबारमार्गसामु संस्कृत छात्राबासको अघिल्तिर गनीको कमलो संवेदनालाई छाम्दै थिएँ । तर काठमाडौँमा आँसु कसको छ र रोइदिनलाई गनी ? मलाई सोध्न मन थियो । तर दायाँ कम्मरमा झोला फिर्‌फिर् नचाउँदै ऊ सडकपारी हुँदै क्षणमै ओझेल पर्‍यो।
मे ३ २००८ (नक्साल)